११ वर्षीय र्‍यापरले मच्चाए तहल्का ! :: Setopati
११ वर्षीय र्‍यापरले मच्चाए तहल्का !
द न्यूयोर्क टाइम्स भदौ ९
गाजा सहरका ११ वर्षीय अब्देल रहमान अलशान्ति स्कुलमा आफ्ना साथीहरूमाझ र्‍याप गाउँदै। तस्बिरः रोयटर्स/द न्यूयोर्क टाइम्स
ग‍ाजा सहरको एक विद्यालयमा सात कक्षा अध्ययनरत ११ वर्षीय अब्देल रहमान अलशान्ति यतिबेला 'भाइरल' छन्। ९ वर्ष हुँदादेखि नै र्‍याप गाउन थालेका उनी यसपटक आफूले गाएको र्‍यापकै कारण गाजाको राष्ट्रिय चासो बनेका छन्।
अब्देलले स्कुल अगाडि बसेर आफूलाई मनपर्ने गायकको र्‍याप गाएको भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेका थिए। गाउँदा स्पष्ट र आत्मविश्वासी देखिने उनको भिडिओमा दस लाख बढी भ्युज पुगेको छ। उनलाई विश्वका प्रसिद्ध र्‍यापरहरूले समेत प्रशंसा गरिरहेका छन्।
तर अब्देलले गाएको र्‍यापको विषय र अर्थका कारण उनी समस्यामाा परेका छन्। र्‍यापको सन्देशबारे एक रसियन समाचार आउटलेटले प्रश्न गर्दा अब्देलले भनेका छन्, 'म हामी (गाजा) र इजरायल बीच मेलमिलाप र सद्भाव फैलाउन चाहन्छु। झगडा र युद्धको कुनै कारण छैन। हामीले दुई राष्ट्रबीच सम्बन्ध राम्रो बनाउनु पर्छ।'
This 11-year-old in Gaza taught himself English by listening to American rap music. Now he’s using his lyrics to spread unity and love. pic.twitter.com/hwMmQKMqdg
— AJ+ (@ajplus) August 23, 2020
अब्देलको यो टिप्पणी र सन्देशको गाजामा कडा आलोचना भएको छ। गाजा आतंकवादी समूह हमासको नेतृत्वमा चलिरहेको छ। उनीहरू इजरायलविरुद्ध लड्नका लागि वकालत गरिरहेका छन्। उनीहरू इजरायलले प्यालेस्टाइन भनेर कब्जा गरिएको भूमि फिर्ता लिन खोजिरहेका छन्।
गाजामा मात्र होइन, यस विषयलाई लिएर प्यालेस्टाइनवासीहरू समेत अब्देल र उनका बुवा सालेह अलशान्तिमाथि जाइ लागिरहेका छन्। बुवाले नै अब्देललाई प्यालेस्टाइन सम्बन्धी सही शिक्षा नदिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा सालेह पनि आलोचित बनिरहेका हुन्।
यसरी विवाद र आलोचनाका सिकार भइरहेका सालेहले नयाँ भिडिओ बनाएर पोष्ट गरे जसमा उनले अब्देलले इजरायलसँग शान्ति र प्रेम खोजेको अर्थ नभई विश्वमा शान्ति छाउनुपर्ने अर्थ लगाएको बताएका छन्।
उनकै अनुरोधमा रसियन आउटलेट, रसिया टुडेले अब्देलसँगको अन्तर्वार्ताको भिडिओ हटाएको छ।
'अब्देल जम्मा ११ वर्षका छन्। उनले गलत हिज्जे बोले,' बुवा सालेहले भनेका छन्, 'अथवा ऊ साह्रै थाकेका कारण यो हुनसक्छ।'
अब्देलका बुवाको यो भनाइलाई थुप्रै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले स्वीकारेका छन् भने धेरैले ११ वर्षे बालकले बोलेका कुरालाई आलोचनात्मक विषयका रूपमा हेर्न नहुने बताएका छन्। केहीले भने अब्देलले भनेका कुरामा सहमति जनाउँदै इजरायलसँग शान्तिपूर्ण अवस्थामा बस्न किन सम्भव नरहेको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्।
इजरायलसँग कुनै पनि किसिमका मेलमिलापका लागि आएका आह्वानहरू गाजाका धेरै सहरमा वर्जित मानिन्छ। इजरायलीहरूसँगको सहकार्य र सञ्चार पनि गाजामा अपराध मान्न सकिन्छ। यद्यपि अब्देल रहमानको टिप्पणीलाई यस रूपमा हेरिएको छैन।
अब्देलको 'भाइरल' बनेको र्‍याप भिडि‌ओ उनकै बुवाले खिचेर सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेका हुन्।
अब्देलका अनुसार त्यो भिडिओले गाजामा रहेका प्यालेस्टाइनवासीको पीडा सम्बोधन गरेको छ, जसको आर्थिक अवस्था इजरायल र इजिप्टले गरेको नाकाबन्दीका कारण दयनीय अवस्थामा पुगेको छ।
'अरूले आफूलाई जसरी व्यवहार गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ, त्यसरी नै तपाईंले पनि अरूलाई व्यवहार गर्नुपर्छ,' उनले भनेका छन्, 'म विभिन्न ठाउँ र जातिहरूबीच भइरहेको हिंसा र भेदभाव रोक्न चाहन्छु।'
प्यालेस्टाइनका र्‍यापरहरूले समेत अब्देलमा ठूलो सम्भावना देखेको बताएका छन्।
अब्देल आफ्ना बुवा सालेहसँग आफ्नो घरमा। तस्बिरः तस्बिरः रोयटर्स/द न्यूयोर्क टाइम्स
'उनीसँग प्रवाह, गति, खुबी र कथा छ,' इजरायलका प्यालेस्टाइन नागरिक एक अनुभवी र्‍यापर टेमर नाफरले भनेका छन्, 'सही प्रशिक्षण पाएमा अबको एक-दुई वर्षमा अब्देल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उत्रन सक्छ।'
अर्का प्यालेस्टायनी-अमेरिकन र्‍यापर वाहिब नासानले पनि अब्देलको तारिफ गर्दै 'शक्तिशाली र प्रेरणादायी सिर्जना' भनेका छन्।
'ऊ सकारात्मक सन्देश फैलाउन चाहन्छ भन्ने मैले देखेको छु,' नासानले भनेका छन्।
अब्देलले गाएको भाइरल र्‍यापको शब्द यसरी सुरू हुन्छ- सबैभन्दा पहिला यो हाम्रो देश हो। यो कसरी चलिरहेको छ मलाई बताउन दिनुहोस्।
गाजामा संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा सञ्चालित स्कुलमा पढ्दै गरेका अब्देल आफूले अनलाइनमा अंग्रेजी र्‍याप सुन्दै सिकेको बताउँछन्। उनले केही र्‍यापका कभर रेकर्ड गराइसकेका छन्। उनी अहिले र्‍यापका लागि आफ्नै शब्द तयार पार्दैछन्।
बास्केटबल र स्केटिङमा पनि रूचि भएका अब्देलले सबभन्दा रूचाउने अमेरिकी र्‍यापर इमिनेम हुन्। उनको भविष्यको योजना नै अब्बल र्‍यापर हुनु र संयुक्त राज्य अमेरिका भ्रमण गर्नु भएको बताउँछन्।
आफ्नो भिडिओमा आएका नकारात्मक टिप्पणीहरूले उनलाई दुखी बनाएको छ?
द न्यूयोर्क टाइम्सको यो प्रश्नमा उनले राम्ररी जवाफ दिन पाएनन्।
'अलिअलि,' ११ वर्षका मात्र भए पनि अब्देल सोचीसम्झी बोल्न खोज्दै थिए। तर यति भन्नेबित्तिकै उनका बुवा सालेहले रोके र आफ्ना छोराले यसबारे थप टिप्पणी नगरोस् भन्ने चाहेको बताए।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ ९, २०७७, ०३:३०:००